90 Qodobbada Salaadda oo looga soo horjeedo kooxda weyn ee aayahaaga | QODOBADA LAGU SAMEEYO
Bogga ugu weyn Dhibcaha salaadda 90 Qodobbada Salaadda oo looga soo horjeedo kooxaha waaweyn ee aayahaaga
90 Qodobbada Salaadda oo looga soo horjeedo kooxaha waaweyn ee aayahaaga
Numbers 14: 30-33:
30 Markaasaa Kaaleeb dadkii ku aamusiiyey Muuse hortiisa, oo wuxuu ku yidhi, War haddiiba ina keena, aynu hanti qabsanno; maxaa yeelay, annaguba waannu karaynaa inaynu ka adkaanno. 31 Laakiinse nimankii isaga raacay waxay yidhaahdeen, War innagu dadkaas kuma kici karno, waayo, way inaga xoog badan yihiin. waayo, way inaga xoog badan yihiin. Oo waxay soo bixiyeen war xun oo dalka ka soo baxay oo ay reer binu Israa'iil baadiyeen, oo waxay yidhaahdeen, Dalka aannu u nimid inaannu soo baadhinnay waa dal baabba'ay kuwa deggan. oo dadkii aannu ku dhex aragnay oo dhan waa dad cimri dheer. Oo halkaasaan ku aragnay dad waaweyn oo reer Canaaq ah oo ka yimid Rafaa, oo weliba waxay kuula muuqdeen sida ayax oo kale, oo sidaasaannu hortooda ku aragnay.
Ma jiro wax weyn oo yimaada mucaarad la'aan. Shaydaanka ayaa had iyo jeer isku dayi doona inuu ka joojiyo rumaysta inuu oofiyo aayaha. Maanta waxaan soo qaadaneynaa 90 barqadood oo duco ah oo aan kaga hor imaaneyno kooxdaada mustaqbalka. Rafcaanku waa aayaha rag xoog badan Taasoo jidadkaaga ku weyneeysa weynaan. Si aad u dhaqan gashid oo aad u fuliso masiirkaaga, waa inaad ku mashquushaa meesha allabariga salaadda si aad uga adkaato jinniyadu jidkaaga weynaanta.
Tani qodobbada salaadda waxaa sidoo kale lagu bartilmaameedsadaa dilayaasha aayaha iyo kuwa wax dumiya. Markaad ka hadlaysid ducadan, cadow kasta oo aayahaaga ah waxaa lagu baabi'in doonaa magaca Ciise. Noloshu waa goob dagaal waana salaadda kaliya ee ka badbaada, meesha allabariga salaaddu waa masraxa dhammaystirka himilooyinka. Sidaad uga qaybqaadan laheyd qodobbada ducada ee ka dhanka ah kooxda weyn aayahaaga, waxaan kuu arkaa inaad fulineyso aayaha qaabka weyn ee magaca Ciise. U soo ducee tukashada salaadddan maanta rumaysad leh oo filaya marag ka rogid ah magaca Ciise.
1. Aabe, waad ku mahadsantahay xafidaada mustaqbalkeyga magaca ciise.
2. Aabe, waxaan kuugu mahadnaqayaa badbaadadaada iyo badbaadintaada nolosheyda magaca Ciise.
3. Waxaan isku daboolaa dhiigga Ciise.
4. Aabo, waxaan kaa codsanayaa cafis dembiyada iyo nimcada si aan ugu noolaado sida ciise masiix ciise.
5. Aabo, magaca Ciise, waxaan kasoo horjeedaa awood kasta oo horey loo abaabulay oo looga soo horjeeday salaadan.
6. Waxaan baabi'iyaa awooda xarig kasta oo shaydaan ah noloshayda, magaca Ciise.
7. Dhammaan wakiilada shaydaanka, igu sii daa, magaca weyn ee Rabbigeenna Ciise Masiix.
8. Waxkastoo wakiil ka ah adduunka jinniyada oo ka soo horjeeda shaqadayda, waxaa lagu baabi'in doonaa dabka Ilaah, iyadoo lagu bixiyay magaca Ciise.
9. Ruuxa Ilaaha nool, noloshayda oo dhan igu noolee, magaca Ciise.
10. Ilaahow, i burburi, iga fogee oo xooggayga cusboonaysii, magaca Ciise.
11. Ruuxa Quduuska ah, indhahayga u furo si aan u arko wixii ka sii muuqda kuwa aan la arki karin, magaca Ciise
12. Sayidow, shaqadayda ku qor dabkaaga oo igu sii daa qorrax xagga sare magaca Ciise.
13. Sayidow, naftayda xoree si aan ugu hoggaamiyo hoggaanka Ruuxa Quduuska ah aagagga noloshayda oo dhan magaca Ciise.
14. Ruuxa Quduuska ah, i bar inaan ku tukado dhibaatooyinka halkii aad ku baryi lahayd iyaga, magaca Ciise.
15. Sayidow, iga badbaadi been aan sheego oo naftayda.
16. Xannibaad kasta oo shar ah iyo silsilad kasta oo caqabad ku noqota guuleysata, magaca Ciise ha lagu caweeyo.
17. Waxaan ku canaantaa ruux walba oo dhagola'aanta iyo indho la’aanta ah nolosheyda, magaca Ciise.
18. Eebow i xooji aan shaydaanka iska caabudo si uu iga cararo.
19. Waxaan doortay in aan rumaysto warbixinta Rabbi iyo cid kale, magaca Ciise.
20. Sayidow, indhahayga iyo dhegahayga u dhig si ay wax u arkaan oo ay samada uga maqlaan waxyaalo yaab badan.
21. Sayidow, ii subag inaan tukado adiga la'aan,
22. Magaca Ciise, waxaan ku qabtaa oo burburiyaa awood kasta oo ka dambeysa hawl qabad kasta oo dhaca.
23. Ruuxa Quduuska ah, dabkaaga ha igu shub magaca Ciise.
24. Ruuxa Quduuska ah, ku qarsada sirahayadayda mugdiga ah, magaca Ciise.
25. Ruux jahwareer, noloshayda ku xaji, magaca Ciise.
26. Awooda Ruuxa Quduuska ah, waxaan ku diidanahay awooda shaydaan ee shaqadayda, magaca Ciise.
27. Biyo nolosha waxaad ku tirtirtaa shisheeye kasta oo aan noloshayda ahayn, magaca Ciise.
28. Idinka oo ah cadaawayaashayda shaqadayda, ku curyaam, magaca Ciise.
29. Sayidow, bilaw inaad nolosha ka maydho, Waxaas oo dhan oo aan adiga ka fikirin.
30. Ruuxa Quduuska ah dab, igu shid daradda Ilaah, magaca Ciise.
31. Sayidow, subkidda Ruuxa Quduuska ahu ha burburiyo harqood kasta oo dib u gurasho ah noloshayda.
32. Waan niyad jabayaa qabasho kasta oo jinni ah oo ruuxayga-ah, magaca Ciise.
33. Dhiigga Ciise, ka saar wax kasta oo noloshayda ah calaamadda aan horumarka lahayn, ciise ahaan
34. Wareegtooyin kahortaga horumarka, waa laga noqday, magaca Ciise.
35. Dabka Ruuxa Quduuska ah, burburi dhar kasta oo shaydaan ah oo noloshayda ku jira, oo magaca Ciise.
36. Sayidow, i sii furaha furaha guusha wanaagsan, si meel kasta oo aan tago, albaabbada guulaha la iigu furi doono.
37. Guri kasta oo shar leh, ee aniga iyo aniga shaqadayda lagu dhisi jiray, waa lagu wada dumin doonaa, magaca Ciise.
38. Rabbiyow, igu yeel qof quduus ah adiga, magaca Ciise
39. Sayidow, saliiddaydii ugu fiicneyd hawshaydii ha igu soo dejiso magaca Ciise.
40. U adeegi maayo cadaawayaashayda. Cadaawayaashaydu way ii sujuudi doonaan magaca Ciise.
41. Waxaan ku xiraa cidlo iyo ruux saboolnimo noloshayda oo dhan magaca Ciise.
42. Waxaan diidey subkida aan guul gaadheyn shaqadayda, magaca Ciise.
43. Waxaan burburin doonaa qalcadaha oo dhan oo ka gees ah horumarkayga, magaca Ciise.
44. Waxaan xusuustaa dhammaan barakeygii barakeysan ee lagu tuuray wabiga, kaynta iyo bangiga shaydaanka, magaca Ciise.
45. Waxaan jaray dhamaan xididada dhibaatooyinka noloshayda, magaca Ciise.
46. ​​Sanqarada sheydaanka, waa in lagu joojiyaa meelkastoo nolosheyda ah, magaca Ciise.
47. abeesooyin jinniyo qaba, ha lagu sumoobo - meelaha yar oo noloshayda ka mid ah, magaca Ciise.
48. Afkayga waxaan ku cadeynayaa in waxna igu dhici doonin, magaca Ciise.
49. Idinka xerada cadowgu, lagu wareerey, magaca Ciise.
50. Dulliyeyaasha ruuxiga ah ee noloshayda, lagu ceebeeyo, magaca Ciise.
51. Dhammaan geesiyaasheyda, hel hoos u dhac xagga ruuxa ah, magaca Ciise.
52. Sayidow, intaan shaqadayda ku jiray, nimcadaada iyo dadkaaguba i hay sanadkaan, magaca Ciise.
53. Waan diidayaa xadidaada jinka ee ku saabsan horumarkayga, magaca Ciise.
54. Dhammaan qoraallada xun ee aniga igu saabsan, ayaa lagu curyaamiyaa, magaca Ciise.
55. Waan diiday ruuxa dabada, waxaan doortaa ruuxa madaxa, magaca Ciise.
56. Dhammaan kuwa magacayga ku sharraxa xumaanta, oo niqiin, Magaca Ciise.
57. Saaxiibbada sharka ah oo dhan, samee khaladaadka idin soo bandhigi lahaa, magaca Ciise.
58. Idinka ragga xoogga leh ee labada dhinac ee qoyskayga ah, ee weeraraya xirfadayda, naftiinna ku halaaga, magaca Ciise.
59. Waan diiday inaan xidho dharka dhibaatada iyo murugada, magaca Ciise.
60. Mucaarad kasta, qalbigayga ka carara, magaca Ciise.
61. Sayidow, ruuxa ka cararaya dembiga ha igu xakameeyo noloshayda.
62. Waxan sheeganayaa xuquuqdayda oo dhan hadda, magaca Ciise.
63. Ruuxa Quduuska ah, bal hadda i sii iftiiminta ammaantaada, magaca Ciise.
64. Ruuxa Quduuska ah, igu noolee magaca Ciise.
65. Waxaan iska daayaa addoonsiga aan dhaxlay, oo saamaynaya xirfaddayda, magaca Ciise.
66. Sayidow, u soo dir geedkaaga dabka ah aasaaska noloshayda oo wada baabbi'ii geed kasta oo shar ah oo waxtarka u leh guulaha naftayda.
67. Dhiiga Ciise, ayaa laga saarayaa nidaamkayga, kayd kasta oo shaydaanka laga dhaxlo, magaca Ciise.
68. Waxaan amar ku siinayaa dhamaan xoogaga aasaasiga ah ee ku xiran nolosheyda in curyaanimo lagu sameeyo, magaca Ciise.
69. Ubad kastoo shar leh, oo ka soo horjeedda shaqadayda, ayaa magacayga loo awood siin doonaa aniga, magaca Ciise.
70. Waxaan tirtirayaa cawaaqibka ka dhalan kara magac kasta oo magac beel ahaaneed oo ku xiran shaqsigayga, magaca Ciise.
71. Waan kafaraxsanahay xukun kasta oo shar ah iyo xakamayn, magaca Ciise.
72. Feker kasta oo shar ah, oo ka soo hor jeeda shaqadayda, wuxuu ka yimaadaa isha, magaca Ciise.
73. Sayidow, qorshooyinka burburka leh ee cadowgu hagu talojiro shaqadayda inay wejiga ku qaribaan, magaca Ciise.
74. Sayidow, ujeedadayda jeesjeeska ah ha loo beddelo il mucjiso ah, magaca Ciise.
75. Dhammaan awoodaha kafaala qaadaya go'aannada xunxun ee aniga iga dhan ah, oo lagu caayo magaca Ciise.
76. Adigu waxaad tahay nin madax adag, oo wakiil ii ah aniga iyo shaqadayda, dhulka ku dhaca oo noqda daciifnimo, magaca Ciise.
77. Adigu qalcado kasta oo reer Qorax, Daataan iyo Abiiraamow, kuwa ila diriraya waad ku wada burburin doontaa magaca Ciise.
78. ruux kasta oo Balcaam, oo loo kiraystay inuu i habaarayo, waxay ku dhacdaa amarka Balcaam, magaca Ciise.
79. Ruuxii Sanballat iyo Toobiya oo dhan, iyagoo si xun iigu hindisay, Dhagaxyada ku wareejiya magaca Ciise.
80. Ruux kasta oo Herodos ahaa, waa lagu ceebeeyay, magaca Ciise.
81. Ruux kasta oo Goli'ad ka mid ahi wuxuu qaataa dhagaxyada dabka, magaca Ciise.
82. Ruux walboo Fircoon ah, wuxuu ku dhacaa Baddaada Cas oo halaag, magaca Ciise.
83. Dhammaan khalkhalgelinta shaydaan ee ujeedkoodu yahay in la beddelo mustaqbalkayga, ha lagu jahwareero, magaca Ciise.
84. Dhammaan faafiyeyaasha aan faa'iido doonka ahayn ee wanaaggayga, waa la aamusiiyaa, magaca Ciise.
85. Indhaha oo dhan ee isha lagu hayo, ee aniga iyo shaqadayda ilaashaday, ayaa indha la ', magaca Ciise.
86. Dhammaan qalabyada jinka ee gadaal u dhaca, oo loo rakibay si loo horjoogsado horumarka shaqadayda, dubay, magaca Ciise
87. Hurdo kasta oo shar leh, oo loo geeyo inay waxyeello u geysato aniga iyo shaqadayda, waxaa loo beddelaa hurdada dhimashada, magaca Ciise.
88. Dhamaan hubka iyo aaladaha daalimiinta iyo kuwa wax ciqaaba, waxaa laga dhigayaa kuwo aan tabar laheyn magaca Ciise.
89. Dabka Ilaah, baabi'i awoodda ku shaqeysa gaari kasta oo ruuxi ah oo aniga iyo shaqadayda ka hor imanaya, magaca Ciise.
90. Dhammaan talo xun oo ka dhan ah raallinimadayda, dhaca iyo kala go ', magaca Ciise.
Aabe, waad ku mahadsantahay ka jawaabida salaaddayada magaca Ciise.
article Previous90 Dagaalkii lagaga soo horjeeday qodobbada Salaadda ee Haamaan 2020
Next article60 Dhibcood oo Salaadda loogu talagalay Naagidda Subagga Cusub
Ellington July 30, 2019 Saacadu markay ahayd 5:19 pm
SubxaanAllah. Waxaan ku arkaa gacanta Adonai, Jehovah Rapha, Alpha & Omega noloshayda noloshayda iyada oo loo marayo dhibcaha salaadda ee xoogga leh ee ka imanaya Wadaadka Ikechukwu Chinedum. Waxaan ugu mahad naqayaa noloshaada. Ilaahay ha ku waasiciyo deegaankaaga ciise magac weyn.
Bernard Nofeembar 28, 2019 saacadu markay tahay 8:48
Waxaan kugula raacsanahay magaca weyn ee Ciise!
Waad ku mahadsantahay baryada cajiibka ah ee salaadda.
Aamiin kugbadzor Luulyo 28, 2020 saacadu markay ahayd 7:38 am
Waxaan kuugu mahad celinayaa aqoontaada ducada. Waad ku mahadsan tahay Ilaahay ha kuu barakeeyo shaqadiisa.
Aamiin kugbadzor Luulyo 28, 2020 saacadu markay ahayd 7:47 am
Waan kugu raacsanahay inaad ku biirto kooxdan ducada ah.
Waad ku mahadsantahay qodobbada salaadda. Magaca Ciise Aamiin
Aamiin kugbadzor Luulyo 28, 2020 saacadu markay ahayd 7:49 am
Juliette Oktoobar 10, 2020 saacadu markay tahay 7:42 pm
gisella Sebtember 8, 2021 saacadu markay tahay 4:15 pm
Haye, waa Buugga Tirooyinka Cutubka 13aad .. Ma aha 14
30 Salaadood Guusha Imtixaanaadka
20 Furitaanka Qodobbada Salaadda ee Adeegga Kaniisadda
5 Jeer Waad Isticmaali Kartaa Sabuurka 20
Salaada maalinlaha ah ee fikirka iyo uurka